ကုမ္ပဏီသတင်းများထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းများစက်ရုံ & ပေးသွင်း
"Intermodal Aisa 2018" မှာ Jointech
18-07-31 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အဆိုပါ Intermodal Aisa 2018 ခုနှစ်ဧပြီလ 20 ရက်နေ့တွင်ရှန်ဟိုင်းကုန်စည်ပြပွဲအတွက်ခမ်းနားဖွင့်လှစ်မျက်မြင်။ ဤသည် Exposition ထိုကဲ့သို့သောဆံ့အဖြစ်အချို့သောသက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများမှပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာသစ်များနှင့်ထုတ်ကုန် clustering, "တစျခုမှာခါးပတ်နှင့်အလမ်းမ" ၏နောက်ခံအောက်ရှိကြီးမားအခွင့်အလမ်းကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် ...
ပထမဦးစွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်အကိုင်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရ? ကွာချသည့်တစ်ဝက်တစ်ပျက်အညီကုန်ပစ္စည်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ကုန်စည်, သေချာစေရန်မည်ကဲ့သို့ 1,? ပုဂ္ဂလိကဘဝဆွဲထုတ်, ယာဉ်မောင်းအန္တရာယ်မောင်းနှင်မှု, လောင်စာဆီခိုးမှု, ဘတ်စ်ကား၏ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုမှုတားဆီးဖို့ဘယ်လို 2,? t ကို၏အနေအထားကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့ဘယ်လို 3. ...